Wararka Maanta: Sabti, Aug 4 , 2012-Ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa AMISOM oo saakay la wareegay gacan ku haynta Garoonka diyaaradaha KM-50
Jen. Cali Caraaye Cosoble (Gacma-duulle) oo ah taliyaha ciidamada DKMG ah ee ka dagaalamaya gobolka Shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM aysan la kulmin wax dagaallo ah, ayna haatan ku sugan yihiin garoonka iyo goobo ku dhow-dhow.
"Ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa saakay ka dhaqaaqay xerada Laanta-buuro oo bishii hore ay qabsadeen, waxaan u suuro-gashay inay la wareegaan garoonka KM-50 iyo tuulooyin agagaarkiisa ku yaalla," ayuu yiri Jen. Gacma-duulle.
Sidoo kale, jeneraalku wuxuu sheegay in dhallinyaro ka tirsan Al-shabaab ay dhowr goobood kasoo tuureen rasaas, balse ay markii dambe iska carareen, wuxuuna rajo ka muujiyay inay horay uga sii socon karaan goobihii ay saakay la wareegeen.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in xeelad dagaal ay uga baxday deegaannada ay la wareegeen ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM , iyadoo dad goobjoogayaal ah laga soo xigtay inay arkeen ciidamada dowladda iyo kuwa caawinaya ee AMISOM oo ku sugan agagaarka garoonka KM-50.
Garoonka diyaaradaha ee KM-50 ayaa wuxuu 50-km dhinaca koonfureed kaga beegan yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna 20-km u jiraa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada hoose, iyadoo garoonka oo ahaa mid laga dajin jiray jaadka uu sannadihii ugu dambeeyay ahaa mid aan shaqeynayn.
Deegaannada ay ciidamada dowladdu saakay la wareegeen ayaa waxay noqonayaa goobihii ugu horreeyay oo si aad ah uga fog Muqdisho oo ay oo ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa Midowga Afirka kala wareegaan Al-shabaab oo muddo gacanta ku haysay.